Donald Trump vetoes dhamaadkii hawlgalka milatari ee Maraykanka ee Yemen - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Donald Trump vetoes dhamaadkii hawlaha milatari ee Maraykanka ee Yaman
Donald Trump vetoes dhamaadkii hawlaha milatari ee Maraykanka ee Yaman
Donald Trump ayaa xayiray Talaadadii shirweynaha qaran ee ku baaqay in la joojiyo taageerada Mareykanka ee ku aaddan isbahaysiga Sacuudi Carabiya ee Yemen. Tani waa markii labaad ee madaxweynuhu uu ku dhawaaqay codad ka timid saraakiisha Mareykanka.
Go'aanka ayaa la filayay. Donald Trump Wadanka Maraykanka ayaa waxaa uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynihii ugu da'da yaraa ee lagu magacaabo 16,Saudi Arabia au Yemen.
"Xallinta Tani waa waxtar lahayn oo khatar ah isku day ah si ay u wiiqaan gacmaynayso dastuurka aan, halis galinaya nolosha dadka muwaadiniinta Mareykanka iyo ciidamada, maanta iyo mustaqbalka labadaba," ayuu yiri Donald Trump in fariin wariyeen Golaha cad.
>> Akhriso: Iska ilaali iibka hubka ee Riyadh, khataraha qaarkood, diidmo badan
Qaar ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriga ayaa ku biiray xisbiga Dimuqraadiga si ay u taageeraan xalinta loogu yeedho askarta Maraykanka si loo joojiyo ka qayb qaadashada dagaalada Yemen. Madaxwaynaha Maraykanka, oo aqlabiyad ku leh aqalka Senate-ka.
Saddex meelood laba meel codadka loo baahanyahay
Saraakiisha la doortay waxay aaminsan yihiin in doorka Mareykanka ee Yemen ay ku xad gudubtay waajibaadka dastuuriga ah ee Congress-ka, maaha madaxweynaha, ansixinta wixii galo ah ee dagaalka. Waxay sidoo kale ujeedadoodu ahayd inay fariin xooggan u dirto Riyadh si ay ugu lug lahaato dhibaatooyinka bani'aadamnimada ee Yemen iyo dilka suxufiyiinta Sacuudiga iyo kuwa ka soo horjeeda Jamal Khashoggi bishii oktoobar.
Aqalka Cad ayaa Talaadadii xaq taageerada Maraykanka si ay isbahaysiga: "Waa waajib our si ay u ilaaliyaan ammaanka badan 80 000 Americans ku nool dalalka qaar ee isbahaysiga oo ay yihiin dhibanayaal weerarrada Houthis ka yimid Yemen. "
Si loo tirtiro diidmada madaxweynanimada, go'aanku waa inuu helaa ugu yaraan saddex-meelood labo meel codadka Golaha iyo Aqalka si cod bixin ah oo cusub, taas oo ah taageero badan marka loo eego qoraalka la helay goorta la ansixiyay.
Tani waa markii labaad oo Donald Trump helaa isaga qudhiisa lagu qasbay in ay diido qoraal ah by Congress maray bishii March, in ay la xakameeyey nidaamka degdeg ah uu ugu amreen in lagu furo dhismaha ee lacagaha quduuska ah derbiga uu doonayo in uu u simanahay aniga xuduudda la leh Mexico.
Qodobka Source: https://www.france24.com/fr/20190417-yemen-donald-trump-oppose-son-veto-a-une-resolution-congres-americain
Yurub: Dad badan oo madaxweyne ah ayaa joojiya ololaha "ilaa ogeysiis dheeraad ah"
Cameroon - Beddelka sare ee gobolka: Chantal Biya wuxuu ka mid yahay guntii Paul Biya (Warqada Casriga ah)